Jizọs Agaa Ije n’Elu Mmiri | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Jizọs Agaa Ije n’Elu Mmiri
Jizọs nwere ikike ịgwọ ndị ọrịa na ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. O nwekwara ikike ime ka oké ifufe na ebili mmiri kwụsị. Mgbe Jizọs kpechara ekpere n’elu ugwu, ọ nọ ebe ahụ hụ oké ifufe na-efe n’Oké Osimiri Galili. Ndịozi ya nọkwa n’ụgbọ ha n’Oké Osimiri ahụ. Oké ifufe ahụ mere ka o siere ha ike ịkwọ ụgbọ ha n’ihi na ọ na-efesi ike. Jizọs si n’elu ugwu ahụ gbadata, ma malite ịga ije n’elu mmiri na-agakwuru ndịozi ya n’ụgbọ ha. Mgbe ndịozi ya hụrụ onye na-aga ije n’elu mmiri, ụjọ tụwara ha. Ma, Jizọs gwara ha, sị: ‘Unu atụla ụjọ. Ọ bụ m.’
Pita gwara Jizọs, sị: ‘Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ bụ gị, gwa m ka m bịakwute gị.’ Jizọs gwara ya, sị: ‘Bịawa.’ N’ihi ya, Pita si n’ụgbọ ahụ pụta gawa ije n’elu mmiri na-abịakwute Jizọs n’agbanyeghị oké ifufe ahụ. Ka Pita na-abịaru Jizọs nso, o lewere oké ifufe ahụ anya, tụwa ụjọ ma malite imikpu. Pita tiri mkpu, sị: ‘Onyenwe anyị, zọpụta m.’ Jizọs matịrị aka jide ya, ma sị ya: ‘Gịnị mere i ji nwewe obi abụọ? Olee ebe okwukwe gị dị?’
Mgbe Jizọs na Pita banyere n’ụgbọ ahụ, oké ifufe ahụ kwụsịrị ozugbo. Olee otú i chere obi ga-adị ndịozi Jizọs mgbe ahụ? Ha gwara Jizọs, sị: ‘Ị bụ Ọkpara Chineke n’eziokwu.’
Nke a abụghị nke mbụ Jizọs mere ụdị ihe a. O nwekwara oge ọzọ Jizọs na ndịozi ya ji ụgbọ mmiri na-agafe n’akụkụ ọzọ nke Osimiri Galili, Jizọs agaa n’azụ ụgbọ ahụ na-ehi ụra. Ka ọ na-ehi ụra, oké ifufe malitere ife n’oké osimiri ahụ. Ebili mmiri nọkwa na-akụ n’ụgbọ ha, ya emee mmiri eju n’ụgbọ ahụ. Ndịozi Jizọs kpọtere ya, ma gwa ya, sị: ‘Onye ozizi, anyị na-agadị ịnwụ. Nyere anyị aka.’ Jizọs biliri ma gwa osimiri ahụ, sị: “Daa jụụ.” Ozugbo ahụ, ifufe ahụ na osimiri ahụ dara jụụ. Jizọs jụrụ ndịozi ya, sị: ‘Olee ebe okwukwe unu dị?’ Ha gwawara ibe ha, sị: ‘Ma ifufe ma oké osimiri na-erubechara ya isi.’ Ihe a kụziiri ndịozi Jizọs na ha ekwesịghị ịtụ ụjọ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ha atụkwasị Jizọs obi ha niile.
“Gịnị ka m gaara eme ma a sị nnọọ na enweghị m okwukwe n’ịhụ ịdị mma Jehova n’ala ndị dị ndụ?”​—Abụ Ọma 27:13
Ajụjụ: Gịnị mere Pita ji malite imikpu? Gịnị ka ndịozi Jizọs mụtara n’aka ya?
Gịnị ka ndịozi Jizọs mụtara mgbe Jizọs gara ije n’elu mmiri, meekwa ka oké ifufe dajụọ?
Kaadị Akụkọ Pita
Matakwuo gbasara nwoke a na-atụ egwu Chineke.